Soomaaliland iyo waxgarad dib xabad joojin dhex-dhigay beelo ku diriray gobolka Sanaag (Dhegeyso) – Radio Daljir
Agoosto 29, 2013 4:47 b 0
Ceerigaabo, August 29, 2013 – Waxaa heshiis xabad joojin ah la dhex-dhigay beelo dhowaan ku dagaalamay deegaanka Gawsa-weyne oo hoostaga degmada Oog ee ?gobolka Sanaag ee Soomaaliland, heshiiskan ayaa yimid kadib dhex-dhexaadin dheer.
Dagaal beeleedka ka dhacay gobolka Sanaag ayaa waxaa uu sababay in ay dhintaan ilaa 6 ruux iyo dhaawcyo kale oo badan, kuwaas oo ka kooban dhinacyadii dirirtu dhexmartay.
Wasiiro ka tirsan maamulka Soomaaliland iyo waxgarad badan ayaa ku baxay deegaanka dagaalku ka dhacay ee gobolka Sanaag, haatan waxaa lagu guuleystay in la qaboojiyo xiisadii dagaal beeleedka.
Suldaan Mahad Xirsi Maxamuud oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliland oo ku sugan deegaanka dagaalku ka dhacay ayaa sheegay in guul baalaran laga gaaray xasilinta deegaanka, iyadoo lagu guulaystay in xabad-joojin haatan loo diyaar garoobayo fulinteeda.
Dhegeyso Suldaan Mahad uu waramay Jaamac Cabdiraxmaan oo Daljir ka tirsan
Col. Salaad ? Waxaa jira isku dhacyo beeleed oo ka jira Mudug, waxaan ku baaqayaa nabad?(Dhegeyso)